Ukuphuhliswa kwentlanzi: amaqanda | Ngeentlanzi
Ecacileyo ngamaqanda eentlanzi ezingamathambo kwaye uninzi ngeenxa zonke. Kukho inwebu engaphandle egqobayo enee pores ezincinci, ezibizwa ngokuba yi chorion. Inwebu ngokubanzi igudile, nangona kwezinye iintlobo ine-lattice enamacala amathandathu.
El isikhupha kwiqanda ujongene nokubonelela nge- Oovimba bamandla kunye nezondlo ekufuneka umbungu ngexesha lokukhula kwakhe ade abe nakho ukuzondla yedwa, xa sele iyinxalenye yeplankton. Kwezinye iintlobo zeentlanzi, isikhupha sithatha yonke indawo ekhoyo kwaye sishiya kuphela indawo engenamda.
En elasmobinza, bakube benayo ii-ovules ezichumileyo, Zigutyungelwe ngephilisi yecolene enamanyathelo kunye nobukhulu obahlukeneyo ngokuxhomekeke kuhlobo. Kwezinye ii-oviparous shark, umzekelo, le philisi inokubonakala okungaphezulu okanye ngaphantsi koxande, kwaye inikwa imisonto yokulungisa ezantsi.
Ubungakanani bamaqanda buyahluka kakhulu, nangona zimalunga ne-1 mm ubukhulu, kwaye zinokuba phakathi kwe-0,25 kunye ne-7 mm kwiintlobo ezahlukeneyo. Inkqubo ye- ubungakanani beqanda Yeyona inyusa inani lamaqanda kunye nokusinda kwexesha elizayo kwemibungu kunye nolutsha.
Los amaqanda e-benthic , ngokubanzi, zinkulu kuneeplanktonic, ezine-yolk ngakumbi kwaye zimbalwa. Ukukhula kombungu ngaphakathi kweqanda kukude, kwaye umbungu uphuma ukwimeko ehambele phambili, sele enamehlo anombala.
Ukubuyisa fecundity kwintlanzi yokuzala kwepelagic iphezulu kunaleyo ibeka amaqanda benthic. Kukho ubudlelwane obucacileyo phakathi kobungakanani beqanda kunye nokusinda kwesibungu. Kwaye, eyona mibungu mikhulu iyakwazi ukutya uluhlu olubanzi lwamaxhoba kunye nobukhulu, kwaye, kwangaxeshanye, abasesichengeni sokuhlaselwa ngamarhamncwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukuphuhliswa kwentlanzi: amaqanda